Soo-saareyaasha Furaashka Soosaarayaasha - Shirkadayaasha Furaashka ilaaliyaha furaashka, Warshadda
Kaydka 100% Polyester Sherpa Fleece Underblanket
100% Polyester Microfiber Gogosha Furaashka suufka
100% Polyester Microfiber Gogosha Furaashka
Dhiqlaha Anti Sariirta raagaya ee Raaxada King Size Hypoallergeni ...
100% suuf 220gsm terry dhar ah oo leh 0.025mm xuubka TPU & 100% caag 105gsm maro goonni ah
Xaashida tilmaanta Midabka Cad ee Qoraalada ah ee laastikada ku wareegsan oo dhan Cabbirka Mataanaha / Labbada / Boqoradda / King / Cal King Faahfaahin Ku dar wakiilada ka hortagga caarada, waxay si fiican kaaga ilaalin karaan
100% Daboolida Furaashka Biyaha ee Polyester
Xaashida faahfaahinta Waxsoosaarka 100% Polyester Qaboojiyaha Joodariga Biyuhu daboolan yahay 100% Polyester 130gsm dhar qaboojiye + 30gsm TPU ， gogol 100% polyester 130gsm maaliyada dharka qaboojinta Midabka White Note laastikada oo dhan hareeraha Cabbirka Mataanaha: 42 × 78 + 12Queen: 60 × 78 + 12 King : 78 × 72 + 12 Qiimaha Boqorada: 60 × 78 + 12100pcs: $ 6.30 / pc 500pcs: $ 6.00 / pc 1000pcs: $ 5.75 / pc
100% Cotton Knitted Barkinta Barkinta biyaha
Waxyaabaha: 100% cudbi oo lagu tolay TPU TTL: 130GSM. Midab: Caddaan / buluug / casaan / Midab casaan ah ama loo qaabeeyey sida aad u baahan tahay. Baakadaha: carelabel, kaarka gelinta, sabuuradda, warqad yar, polybad, kartoon.
100% Suuf Raaxada Cowska Topper
Waxaan marwalba xooga saarnay tayada. Waxaanan leenahay nidaam taxane ah oo aan dammaanad ka qaadi karno tayada. Waxaan haynaa shan talaabo inta howshu socoto oo ay kujiraan maadada, tolida, badeecada nus dhammaatay, dhammeeyay, xirxirida, iyo gawaarida. Tallaabo kasta waxaan leenahay QC si aan u xakameyno tayada. Sida badeecadaha aan u qalmin, waan hagaajin doonnaa illaa ay u qalmaan. Waxaan damaanad qaadi karnaa inaan kuu soo bandhigi karno alaab tayo sare leh iyo adeeg adiga kuugu fiican.
100% Polyester Micro Plush Biyo Furaashka Biyo La'aanta
Badeecad: 100% Polyester Micro Plush Xaydhada Furaashka biyuhu
Dhar: 100% Polyester 145gsm ayaa tollay terry yar + 40gsm TPU
Fiiro gaar ah: 1.Zip wuxuu ku dhow yahay 3 cabbir, 2 dhinac dheer iyo 1 dhinac gaaban. 2.Waxay ku dhowdahay Velcro Flap.
Faa'idooyinka daboola furaashka: diida buuqa, diida boodhka, ilaali joodarigaaga, ilaali maqaarkaaga, oo ku habboon waayeelka, carruurta, xayawaannada qoyska si ay u isticmaalaan.
100% Polyester Terry barkimaanta ilaaliyaha
Waxyaabaha: 100% Polyester Terry dhar leh TPU. Xilliga: Guga / Xagaaga / Dayrta / Jiilaalka. Baakadaha: carelabel, kaarka gelinta, sabuuradda, warqad yar, polybad, kartoon. Waxyaabaha: 100% Polyester 95gsm Terry dhar leh 35gsm TPU.
Cayayaanka Sariirta Dabiiciga ah ee lugaha leh oo raaxo leh Qiyaasta King Hyperallergenic Biyo-ilaaliyaha Furaashka Biyaha
95 GSM 100% polyester oo leh 35GSM TPU lamination, SKIRT: 60 GSM dhar tolmo leh oo caag ah. Bacda PVC oo ay ku jiraan kaararka midabbada lagu rido iyo kartoonka, ama sida aad u codsatay. 1pc / boorso. 100 kumbiyuutarro / midab kayd ah oo leh qiyaaso isku dhafan, 500 nooc / midab khaas ah oo leh cabir isku dhafan, soo dhaweyn muunad ah
70GSM Microfiber + 70GSM Buuxinta + 40GSM aan tolmo wanaagsan lahayn. Bacda PVC oo ay ku jiraan kaararka midabbada lagu rido iyo kartoonka, ama sida aad u codsatay. 1pc / boorso. 100 kumbiyuutarro / midab kayd ah oo leh qiyaaso isku dhafan, 500 nooc / midab khaas ah oo leh cabir isku dhafan, soo dhaweyn muunad ah
Xaashida Qeexida Magaca Magaca Sariirta Anti Sariirta Raagaya Raaxada Boqorka Qiyaasta Biyeyaha Furaashka Biyaha Ka Shaqeeya Nooca BIODY / OEM Fabric 95 GSM 100% caag leh 35GSM TPU lamination, SKIRT: 60 GSM dhar tolmo leh oo lebbis ah Qiyaasta boqorka ama cabbirka isku dhafan ee la qaabeeyey Miisaanka 130gsm ee dharka, 0.65 Kg / pc miisaanka kale ee caadiga ah 110gsm-180gsm 100% polyester terry Xirxirida boorsada PVC oo leh kaararka galka midabada leh iyo kartoonka, ama sida aad u codsatay. 1pc / bac MOQ 10 ...
Badbaadiyaha Furaashka biyuhu
100% Biyo La'aan - Kahortagga dhidid, sariir qoynta, dareerayaasha iyo wasaqda; Dammaanad qaadka tayada 10-sano (FIIRO GAAR AH: Ilaalinta lixda dhinac leh). Hypoallergenic - Wuxuu xannibayaa caarada, xasaasiyadda, bakteeriyada, caaryada iyo caaryada - Xasaasiyadda ugu dambeysa awgeed.